ပိုလီယို ရောဂါဝေဒနာသည် ကလေးငယ်လေးကိုကူညီရင်း နေ့တိုင်း မြေကျွင်းလေးထဲမှာ ထည့်ထားရတဲ့အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ မိုးစက် – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ မိုးစက်ကတော့ ခုလိုကာလတွေမှာ သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ ချွေးနှဲစာ အပြင်(၇)ရက်သားသမီး အလှူရှင်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတွေကို စာနာစိတ်ဖြင့် လိုက်လံ ကူညီနေတာမို့ အများက လေးစားနေရတာပါ ။ ဒါ့အပြင် အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ခက်ခဲနေတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေကိုလည်း ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်… ။
အခုလည်း အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင် ရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရရှာတဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြရင်း ကူညီမှုတွေ ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကလေးရဲ့ မိဘတွေကလည်း ချို့တဲ့တာကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အတော်လေး ရှာဖွေ ရုန်းကန်နေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်…. ။
မိုးစက် လည်းကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ဖြင့် ကူညီမှုတွေပေးဖြစ်ခဲ့ပုံကို “သားရေ …ဒေးစွန်ပါ သာသနာ့နယ်မြေနားမှာပိုလီယိုဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ (၅)သမီးလေးကို မိဘတွေက နေ့စဉ်မြေကျွင်းလေးထဲမှာထည့်ထားရတာ သားရယ်…သား ကူညီလို့ရရင် ကူညီပေးလိုက်ပါဦး….” ဒီလိုလှမ်းပြောတာက ဒေးစွန်ပါမှာ အရင်ရက်က ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ဦးလေး ဦးကံပွင့်ပါ…။ကလေးပုံလေးတွေ တွေ့လိုက်တော့ ရင်ထဲမှာ ဒိန်းခနဲတောင် ဖြစ်သွားရတယ်။ သနားခြင်း ၊စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့ (21.11.2021) မနက်စောစောမှာ ဆရာဦးသျှန်ထွဏ်း ၊ ဦးကံပွင့် နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကလေးကို မြေကျွင်းထဲ ထည့်ထားရတာက မြေဓာတ်ပေးကြည့်တာပါတဲ့။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါ ကလေးမိဘတွေက ပဲခူးတိုင်း ဖဒို ဘက်က တောရွာလေးကနေ ဒီမှာရှိတဲ့ ညီမ အိမ်မှာ လတ်တလောလာရောက်နေထိုင်နေရပြီး ၊ သူတို့သမီးလေး ပြန်ကောင်းဖို့ မျှော်လင့်နေရှာပါတယ်။သို့သော်လည်း…စားဝတ်နေရေးတောင်ခက်ခဲနေတဲ့အတွက် ကလေး အတွက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ တကူးတက သွားရောက်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အလှူရှင်များက တစ်သိန်းကျပ်။ ဆရာဦးသျှန်ထွဏ်း(မြန်မာစာ) ငါးသောင်းကျပ်။ ဦးကံပွင့် ….နှစ်သောင်းကျပ်။ စုစုပေါင်း ၁၇၀၀၀၀ ကျပ်ကို ကလေးမိဘတွေကို လတ်တလောအသုံးစားရိတ်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ် ” ရေးသားထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ မိုးစကျကတော့ ခုလိုကာလတှမှော သူကိုယျတိုငျရှာဖှထေားတဲ့ ခြှေးနှဲစာ အပွငျ(၇)ရကျသားသမီး အလှူရှငျတှနေဲ့ စုပေါငျးပွီး အခကျအခဲ ဖွဈနသေူတှကေို စာနာစိတျဖွငျ့ လိုကျလံ ကူညီနတောမို့ အမြားက လေးစားနရေတာပါ ။ ဒါ့အပွငျ အနုပညာ အသိုငျးအဝိုငျးထဲက ခကျခဲနတေဲ့ သကျကွီးပိုငျးတှကေိုလညျး ကူညီ ထောကျပံ့ပေးလကျြရှိပါတယျ… ။
အခုလညျး အရှယျလေးနဲ့မလိုကျအောငျ ရောဂါ ဝဒေနာ ခံစားနရေရှာတဲ့ ကလေးငယျလေးရဲ့ အဖွဈကို စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွရငျး ကူညီမှုတှေ ပေးခဲ့ပါတယျ ။ ကလေးရဲ့ မိဘတှကေလညျး ခြို့တဲ့တာကွောငျ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ အတျောလေး ရှာဖှေ ရုနျးကနျနရေတယျလို့လညျး သိရပါတယျ…. ။
မိုးစကျ လညျးကိုယျခငျြးစာနာစိတျဖွငျ့ ကူညီမှုတှပေေးဖွဈခဲ့ပုံကို “သားရေ …ဒေးစှနျပါ သာသနာ့နယျမွနေားမှာပိုလီယိုဝဒေနာ ခံစားနရေတဲ့ (၅)သမီးလေးကို မိဘတှကေ နစေ့ဉျမွကြှေငျးလေးထဲမှာထညျ့ထားရတာ သားရယျ…သား ကူညီလို့ရရငျ ကူညီပေးလိုကျပါဦး….” ဒီလိုလှမျးပွောတာက ဒေးစှနျပါမှာ အရငျရကျက ရောကျခဲ့တဲ့ ကြှနျတေျာ့ဦးလေး ဦးကံပှငျ့ပါ…။ကလေးပုံလေးတှေ တှလေို့ကျတော့ ရငျထဲမှာ ဒိနျးခနဲတောငျ ဖွဈသှားရတယျ။ သနားခွငျး ၊စိတျမကောငျးခွငျးမြားစှာနဲ့ပေါ့ဗြာ။ ဒီနေ့ (21.11.2021) မနကျစောစောမှာ ဆရာဦးသြှနျထှဏျး ၊ ဦးကံပှငျ့ နဲ့ ကြှနျတျောနဲ့ သှားရောကျတှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ ကလေးကို မွကြှေငျးထဲ ထညျ့ထားရတာက မွဓောတျပေးကွညျ့တာပါတဲ့။ ဘယျလိုဖွဈဖွဈပါ ကလေးမိဘတှကေ ပဲခူးတိုငျး ဖဒို ဘကျက တောရှာလေးကနေ ဒီမှာရှိတဲ့ ညီမ အိမျမှာ လတျတလောလာရောကျနထေိုငျနရေပွီး ၊ သူတို့သမီးလေး ပွနျကောငျးဖို့ မြှျောလငျ့နရှောပါတယျ။သို့သျောလညျး…စားဝတျနရေေးတောငျခကျခဲနတေဲ့အတှကျ ကလေး အတှကျ ထောကျပံ့ပေးဖို့ ကြှနျတျောတို့ တကူးတက သှားရောကျခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျောနဲ့အလှူရှငျမြားက တဈသိနျးကပျြ။ ဆရာဦးသြှနျထှဏျး(မွနျမာစာ) ငါးသောငျးကပျြ။ ဦးကံပှငျ့ ….နှဈသောငျးကပျြ။ စုစုပေါငျး ၁၇၀၀၀၀ ကပျြကို ကလေးမိဘတှကေို လတျတလောအသုံးစားရိတျအဖွဈပေးခဲ့ပါတယျ ” ရေးသားထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ …။